Saaxiibada Caalamku Waxay Ku Baaqeen In Wadahadalku Sii Socdaan | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Saaxiibada Caalamku Waxay Ku Baaqeen In Wadahadalku Sii Socdaan
Saaxiibada Caalamka * waxay ka argagaxeen hadalada dadweynaha ee shalay ay soo jeediyeen qaar ka mid ah mas’uuliyiinta oo soo jeedinaya in kulanka albaabada u xiran yahay, wadatashiga, qaboojinta ee Dowlada Federaalka iyo hogaamiyaasha Dowladaha xubnaha ka ah Dowlada Federaalka aaney wax horumar ah gaarin. Waxaan ku adkeyneynaa in wadahadalladan ay udub dhexaad u yihiin xaqiijinta hirgelinta hannaanka doorashada ee 17ka Sebtember ee doorashooyinka lagu kalsoonaan karo, iyada oo aan la’aanteed horumarka sannadihii ugu dambeeyay ee xasilloonida Soomaaliya, horumarka dhaqaalaha iyo dib-u-habeynta hay’adaha ay khatar ku jirto.
Waxaan ka codsaneynaa hogaamiyaasha inay si deg deg ah ugu laabtaan wadahadalada si ay heshiis u gaaraan, iyadoo loo marayo tanaasul, arrimaha harsan. Waxaan mar kale ku celineynaa in wada-hawlgalayaashu aysan taageeri doonin geeddi-socodka isbarbar socda, doorashada qeybta ah, ama dadaallada cusub ee horseedaya kordhinta muddooyinka hore. Waxaan ku boorineynaa dhamaan hogaamiyaasha Soomaaliyeed inay is xakameeyaan oo ay ka fogaadaan waxkastoo ficil ah ee sababi kara xiisadaha siyaasadeed.
Marka la eego culeyska xaaladda jirta, wada-hawlgalayaashu waxay la-tashiyo deg-deg ah la sameynayaan ka-qaybgalayaasha kulanka FGS-FMS iyo daneeyayaasha kale ee muhiimka ah ee Soomaaliya si loo ogaado xulashooyinka si dhakhso leh loogu xalliyo dhibaatadan iyo dib ugu soo laabashada wadahadalka.
Previous articleWararkii ugu danbeeyay Doorashada
Next articleItoobiya iyo Masar oo durbaba balaabey kala jiidashada Wadamada Qaarada.
Dalka Soomaaliya ayaa 20 sano u danbeysay loo dhisaayey ciidamo tayo leh oo la wareego awooda dalka Nasiib daro waxay noqodeen kuwa shaqsi u...